लाेकगायीका विष्णु माझी स्वतन्त्र नरहेकाे पुष्टि, रहर कि बाध्यता ? | mulkhabar.com
लाेकगायीका विष्णु माझी स्वतन्त्र नरहेकाे पुष्टि, रहर कि बाध्यता ?
January 7, 2019 | 8:55 am 157 Hits
स्याङ्जा, २३ पुस —अन्तत: लाेकगायीका विष्णु माझी चाैतर्फी दबाब र चासाे बीच सार्वजनिक भईन् । तर उनकाे चेहरा भने अझै सार्वजनिक भएन । बाबुअामासँग समेत भेटघाट गर्न नदिई ११ वर्षदेखी सार्वजनिक जिवनमा नदेखीएकी माझी मिडिया, प्रहरी र सिडियाेकाे दबाबपछि बुर्का अाेडेकी महिलाकाे स्वरूपमा सार्वजनिक भएपछि उनीबारेकाे चासाे झन बढेकाे छ । उनी थप रहस्यमय बन्न पुगेकी छन् । किन उनी बाेल्न चाहिनन्, किन उनी माक्स खाेलेर अनुहार देखाउन चाहिनन् ? उनकाे संरक्षणकर्ता भनिएका सुन्दरमणी अधिकारीले साँच्चै संरक्षण गरेका छन् कि बाध्यतामा उनलाई राखेका छन् ? उनीहरूकाे सम्बन्ध के हाे ? यी विषयकाे जवाफ कहिले र कसरी अाउँछ ?
मिडियामा अाए यस्ताे खबर – आइतबार करिब ११ बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि बा२ज २०९२ नम्बरको सेतो कलरको ट्याक्सी रोकियो । ट्याक्सीबाट पहिले एक पुरुष निस्किए । उनलाई पछ्याउँदै गाढा रातो रङ्गको लामो लुङ्गीमाथि कालो र‌ंगको ओभर कोट लगाएकी, पुरै टाउको छोप्ने गरी कालो पछ्यौरा बेरेको, कालै माक्स लगाएकी एक महिला निस्किइन् ।
आइतबार ताराबहादुरको छोरी भेट्ने सपना पनि पूरा भएको छ। प्रहरीले विष्णुको खोजी गरेर सम्पर्कमा आएपछि माइती पक्षलाई पनि बोलाएको हो। प्रहरीको बिचमा छोरी भेटेका ताराबहादुर भने केही बोल्न सकेनन्। छुट्टै कुरा गर्न पनि पाएनन्। विष्णु सुन्दरमणिसँग आउने र जाने गरिन्। आमा धर्मकुमारीले भने काठमाडौँ नै गएर छोरी भेट्ने गरेको बताएकी थिइन्। – कान्तिपुरबाट